Fampihavanana ataon’ ny FFKM : Tsy noraharahian’ny solombavambahoaka ny fanovana
02/05/2018 admintriatra 0
Manoloana ny tranga misy ankehitriny, dia ny fanakorontanana izay tanterahin’ny solombavambahoaka mpanohitra etsy Analakely sy ny fitokonana ataon’ izy ireo, dia niroso tamin’ ny fampihavanana ny fiangonana amin’ny alalan’ ny FFKM izay niantso ireto solombavambahoaka …Tohiny
Lozam-pifamoivoizana tany Sakaraha : Mpitsabo iray namoy ny ainy
Nitrangana lozam-pifamoivoizana nahafatesan’olona indray tany amin’ny toerana 02 kilometatra tsy hiditra an’i Sakaraha, distrikan’ i Toliara ny alahady lasa teo tokony ho tamin’ny 09 ora sy sasany maraina, ka lehilahy “Médecin Inspecteur” iray avy any …Tohiny
Raharaha vola sandoka : Olona sivy hiakatra fampanoavana
Anio no atolotra eo anatrehan’ny fampanoavana ireo olona sivy, isan’ny tompon’antoka tamin’ny fanamboarana sy fanapariahana vola sandoka teto Antananarivo sy ny manodidina. Intelo miantoana ny fisamboaran’ny teo anivon’ny polisim-pirenena azy ireo. Teny By pass no …Tohiny
Fanafihana mitam-piadiana : Rangahy maty voatifitra teo amin’ny lohany
Mahazo vahana ny tsy fandriam-pahalemana any amin’ny kaomina Ambatofotsy tato ho ato. Etsy andanin’izay dia nahazoam-baovao fa efa somary nilamina raha tao amin’ny tanàna io, volana maromaro izay. Araka izany dia nitrangana fanafihana mitam-piadiana tany …Tohiny
Hotanterahina rahampitso ny fankalazana ny faha-70 taona, hahatsiarovana ny tolona nataon’ireo mahery fo, tamin’ny 29 Martsa 1947. Nisy noho izany ny fepetra maromaro napetraka mba hampizotra izany an-tsakany sy an-davany. Nohamafisin’ny teo anivon’ny prefektioran’ny polisy ...Tohiny